Ingabe Uzolahlekelwa Umsebenzi Wakho Wokumaketha Uwenze Irobhothi? | Martech Zone
Lokhu kungenye yalawo maposi oshayiza ngawo… bese uyahamba uthole isibhamu se-bourbon ukuze ukhohlwe. Ekuboneni kokuqala, lokhu kubonakala njengombuzo ongenangqondo. Emhlabeni ungangena kanjani esikhundleni semenenja yezentengiso? Lokho kungadinga ikhono lokutadisha kahle indlela abathengi abaziphatha ngayo, bahlaziye imininingwane eyinkimbinkimbi namathrendi ngokufanele, futhi bacabange ngobuhlakani ukuthola izixazululo ezisebenzayo.
Umbuzo udinga ukuthi sixoxe ngokuthi yimiphi imisebenzi esiyenza njengabakhangisi nsuku zonke ngokuqhathanisa nalokho okumele kwenziwe ngabakhangisi nsuku zonke. Iningi labakhangisi lihambisa imininingwane kusuka kusistimu iye kusistimu, lithuthukisa futhi lihlaziya imibiko ukunikeza ubufakazi bokuthi ukuhlolwa kwabo bekuvumelekile, kungavumelekile, noma kungathuthukiswa, bese besebenzisa ubuhlakani babo ukushayela imiphumela yebhizinisi.
Ukushayela imiphumela yebhizinisi ngobuhlakani kubonakala kuyisisekelo sabo bonke abathengisi, yize abathengisi abaningi bengasitholi isikhathi esanele sokwenza lokho. Amasistimu aphelelwe yisikhathi, amasistimu awaxhumani, izimakethe ziyashintsha, futhi sidinga izindlela ze-agile ngisho nokuqhubeka nje. Njengomphumela, imizamo yethu eminingi ichithwa ngaphandle kwenani lethu langempela - lokusungula. Futhi ubuciko bungaba yisithiyo esinzima kakhulu ekushintshelweni irobhothi. Lokho kusho… imisebenzi esichitha isikhathi sethu esiningi kuyo ingashintshwa ngokushesha kunokuba ucabanga.
Intuthuko kwezobuchwepheshe iyajabulisa kubakhangisi ngoba izosusa imisebenzi ejwayelekile, ephindaphindwayo, neyokuhlaziya futhi isenze sikwazi ukugxila emizamweni yethu lapho ithalente lethu likhona ngempela - lokusungula.
Ukufunda ngomshini - ngamaphoyinti edatha ahlanganisiwe wedatha yemakethe, idatha yokuncintisana, kanye nedatha yabathengi, isithembiso sokufunda komshini ukuthi izinhlelo zingaphakamisa, zisebenzise, ​​futhi zenze ngcono izivivinyo ezahlukahlukene. Cabanga ukuthi uzobuya isikhathi esingakanani lapho ungadingi ukubhucunga nokubuza idatha kaninginingi.
Ukuhlakanipha okungekhona okwangempela - ngenkathi ubuningi bungaba amashumi ambalwa eminyaka, ubuhlakani bokufakelwa buyintuthuko ehehayo embusweni wezentengiso. I-AI isadinga inani ledatha elingenamkhawulo ukufinyelela ezingeni lokudala lomuntu namuhla, ngakho-ke akungabazeki ukuthi umphathi uzothathelwa indawo noma nini kungekudala.
Lokho akusho ukuthi i-AI ayisoze yakwenza ubuciko, noma kunjalo. Cabanga ngohlelo oluhlaziya idatha yokuchofoza kuzikhangiso - bese luhlaziya izikhangiso ezincintisanayo. Mhlawumbe i-AI ingakwenza funda ungakudala kanjani ukwahluka okunengqondo ezihlokweni zakho nasezibukweni ukuze ukwandise ukuchofoza nokuguqulwa. Asikude neminyaka kulokho - lezi zinhlelo zilapha.
Ubuciko bomuntu bulingiswa kalula, kepha kuzoba nzima ukukwenza. Anginakho ukuzethemba okukhulu ukuthi ngizobona irobhothi lithuthukisa umkhankaso wokudala njengoba uLeisurejobs enza ngale infographic nganoma yisiphi isikhathi kungekudala. Kepha ngiyaqiniseka eminyakeni embalwa ukuthi izokwazi ukufunda kuyo futhi ikopishe!
Ama-47% wabasebenzi babantu azothathelwa indawo amarobhothi ngo-2035, maningi amathuba okuthi uzothathelwa indawo?
Ingabe Umsebenzi Wakho Uzonyamalala?
Tags: 2035aiukuhlakanipha okungekhona okwangempelaukuleleukufunda imishiniukuphakama kwamarobhothiukumaketha kwamarobhothiukufaka irobhothi
Ungakusebenzisa Kanjani Ukumaketha Okusekelwe Akhawunti (ABM)